बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क बिक्री – Butwal 24 News
August 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क बिक्री
बालुवाटारस्थित ललिता निवास काण्डमा मुछिएपछि जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउनुभएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सबै जग्गा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । सरकारी जग्गा लिएको आरोप लागेपछि छोरा नवीनको नामको ८ आना जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरेर चोखिनुभएका पौडेलले ३-३ आनाका दुई कित्ता भने सुटुक्क कारोबार गरेको खुलेको हो ।
उच्च जानकार स्रोतले बताएअनुसार नवीन पौडेलको नाममा रहेको ८ आना जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गरेर मुध्दा मामिलाबाट जोगिएको पौडेल परिवारले ललिता निवासभित्रकै अर्को दुई कित्ता जग्गा भने गोरखाकी नुतन श्रेष्ठलाई बेचेको हो । पौडेलकी श्रीमतीको नाममा रहेको ३ आना र छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको ३ आना जग्गा श्रेष्ठले किनेकी हुन् ।
गोरखा माइती भएकी नुतन अहिले देश बाहिर छिन् । उनकी बैनी इन्दु सिंहले पौडेल परिवारको नाममा रहेको ६ आना जग्गा किन्दा दिदी फसेको गुनासो गरिन् । उक्त जग्गामा अहिले अढाई तले घरसमेत बनिसकेको छ । करोडौँ हालेर किनेको जग्गा विवादित भएपछि नुतन तनावमा छिन् ।
पौडेलले भने जग्गा प्रकरणमा आफूसमेत फसेको बताउँदै आउनुभएको छ । यसअघि उहाँले उक्त जग्गा डा. शोभाकर ढकालबाट किनेको र सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको बताउनुभएको थियो । तर, कतिपयले भने सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र पौडेलले उपहारस्वरूप जग्गा पाएको दाबी गरेका छन् ।
तर,विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार, पूर्वमन्त्रीहरु,सरकारका सचिवलगायत १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा नविनले भने उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यतिबेला अख्तियारले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न नविन राजी भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्नु आवश्यक नभएको जनाएको थियो ।
यससम्बन्धमा जनआस्थाको सम्पर्कमा आएकी इन्दु सिंहले खुलेर कुरा गर्न चाहिनन् । ‘हेर्नुस्, कुरा बाहिर आउँदा हामीलाई नै अप्ठेरो पर्छ,त्यसैले धेरै कुरा नगरौँ । जग्गा मेरो पनि होइन दिदीको हो । दिदी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । म तपाईंसँग पछि कुरा गर्छु’,उनले भनिन् ।
NO MCC प्रधानमन्त्री देउवाले जनभावनाको उच्च कदर गर्दै भने, एमसीसी पारित नगर्ने !
September 1, 2021 September 3, 2021 Butwal 24 News